Carwada Sacadadiin oo samaysay Qiimo-dhimis
Bandhig Carweedka Sacadadiin oo sanadkan lagu sameeyey qiimo-dhimistii ugu weynayd iyo farriin ku socota Macaamiisha…
Maamulaha Shirkadda Sacadadiin Khadar Axmed Ciise
Hargeysa(GNA)-Carwada Dharka iyo agabka kale ee Guryaha iyo Dadka ee Sacaadadiin, ayaa samaysay qiimo-dhimistii ugu balaadhnayd si ay Macaamiisheeda uga faa’idayso.
Carwadan oo sanad walba Shirkaddu samayso todobaadyada u dambeeya ee Bisha Ramadaan, ayaa sanadkan qiimo-dhimisteedu gaadhsiisantahay heerkii ugu sareeyey, sida uu Munaasibada daah-furka Carwada ka sheegay Maamulaha Sacadadiin Axmed Axmed Ciise.
“Qiimo-dhimistu waxay ka bilaabmaysaa 5% illaa 60%, ayey gaadhaysaa, waxaanan u haynaa Macaamiisha Dharka Carruurta iyo dharka dadka waaweyn oo tayo iyo bilicba leh” sidaas ayuu yidhi Khadar Axmed Ciise.
Carwadan, ayaa ah tii 13-aad ee ay Shirkaddu Macaamiisheeda uga faa’idayso xilligan oo kale. inkasta oo qiimo-dhimistu sanadkan ka fiicantahay sanadihii hore, sida uu sheegay Maamuluhu.
Geesta kale, Carwada Sacadadin oo ku taalla dhinaca Galbeed ee Caasimada Hargeysa agagaarka Buurta kala-jeexan, waxa kale oo ay qayb ku leedahay badhtamaha Magaalada Hargeysa, ka soo horjeedka Hudheelka Gargaar.
KHADAR AXMED CIISE QIIMO-DHIMIS SACADADIN Somaliland	2017-06-18
Previous: Guddoomiye Baashe oo soo dhaweeyey Heshiiska Somaliland iyo Khaatumo
Next: BOORAMA,Daawo Golaha Deegaanka Dowlada Hoose Ee Borama Oo Soo Dhaweeyay Dhalinyarada Ururka Himilo Oo Bilaabay Olole Lagu Iftiiminayo Borama.